Pakistan Oo Ka Qaylisay Weerar Ku Soo Maqan - Waadinews | Somali News and Entertainments
Wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Shaah Maxamuud Qarshi ayaa maanta sheegay in dalkiisu uu helay Xogo dhinaca sirdoonka ah oo lagu kalsoonaan karo kuwaas oo tibaaxaya in Hindiya ay damacsan tahay in ay bishan gudaheeda weerarto Pakistan. Wasiirka ayaa intaas ku daray in laga yaabo in weerarku dhaco inta u dhaxaysa 16 ilaa 20 April, isaga oo tibaaxay in Pakistan ay ashkato u gudbisay Shanta dawladood ee Xubinimada joogtada ah ku leh Golaha Ammaanka.
Xiisadaha u dhaxeeya dalalka dariska ah ee hubka nukliyeerka ah haysta ayaa aad sare ugu kacay kaddib markii weerrar lagu qaaday ciidamada Hindiya ee ku sugan Kashmir. Weerrarka ayaa waxaa sheegtay ururka Jaysh Muxamed oo saldhiggiisu yahay waddanka Pakistan, kaddib Hindiya ayaa duqeymo dhanka cirka ah ku qaadday maleeshiyaad ku sugan gudaha waddanka Pakistan.
Dawladda Pakistan ayaa sheegtay in ay soo ridday labo diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo ay leedahahay Hindiya kuwaas oo soo galay hawadeeda Kashmir. Hindiya ayaa iyaduna dhankeeda sheegtay in ay Pakistan diyaarad kasoo ridday balse waxaa sheegashadaas beenisay warbixin Maraykanka ka soo baxday.
Nin Xaaskiisa u dhukuray kaddib markii ay ku gacan-saydhay Wax uu ka Codsaday